Wasiir Bayle: Ma Jirto Lacag Si Sharci Darro Ah Lagu Siiyay Xildhibaannada – Kalfadhi
in Warar, Warbaahinta & Dowladda
Wasiirka maaliyadda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle sheegay in wasaaraddiisa aysan soo marin isla markaana aysan marnaba dhici karin in si sharci darro ah lacag loo baxasho; isla markaana uu qaato qof aan xaq u laheyn.
Hadalka wasiir Bayle ayaa ka dhashay su’aal uu waydiyay mid ka mid ah kasoo qabygalayaashii barnaamij uu qabtay muuqaal baahiyaha qaranka, lana xariirtay lacag loo qaybiyay xildhibaannada intii lagu guda jiray bishii Soon ee ina dhaaftay.
Wasiir Bayle ayaa ku adkeystay in aysan jirin wax lacag ah oo soo maray wasaaraddiisa isla markaana gaartay gacanta xildhibannada.
“ Maaliyadda dalka waa wax la arki karo, ma jirto mana dhicin, dhicina meyso in ay baxdo lacag aan ku jiheysneyn qofkii xaqa u lahaa “
Waxa uu si cad u sheegay in lacag ka baxsan miisaaniyaddii la uu baarlamaanku ansixiyay uusan marnaba bixin xafiiskiisu.
Lacagta uu wasiir Bayle beeniyay, waxaa si cad u qirtay in ay qaateen xildhibaanno la hadlay barnaamijka Galka Baarista ee VOA-da, kuwaas oo sheegay in xildhibaan walba la siiyay lacag dhan 5kun oo dollar.
Lacagta ayaana ahayd hal mliyan lix boqol iyo afartan iyo shankun oo dollar. 10 xildhibaan oo la hadlay VOA-da 7 ka mid ah ayaa sheegay in ay ka timid dowladda Soomaaliya.
Halkan ka akhriso warbixin dheer oo ka hadleysa fasixii golaha Shacabka iyo Lacagta la qaybiyay.
Golaha Shacabka: 11 kulan, shan kun oo doolar iyo saddex bil oo fasax ah